कपालको विकासका लागि अण्डाको आश्चर्यजनक फाइदाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
कपालको विकासको लागि अण्डाको आश्चर्यजनक लाभहरू
घर सुन्दरता सौन्दर्य लेखक- DEVIKA BANDYOPADHYA द्वारा देविका बन्दोपाध्याय सेप्टेम्बर १,, २०१। मा बिग्रिएको कपालको लागि अण्डा कपालको मास्क DIY | यस अण्डाको हेयरमास्कले कपालको क्षति हटाउनेछ। बोल्डस्की
रमणीय, भारी कपाल हुनु धेरैका लागि सपना हो। जहाँ धेरैको स्वाभाविक रूपले राम्रो कपाल हुन्छ, त्यहाँ केही उपचारहरूको बावजुद स्वस्थ र लामो कपाल प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दछ, कपालको विस्तृत हेरचाह उत्पादनहरूको प्रयोग, इत्यादि।
कपाल झर्नु र भंगुर कपाल एक दुःस्वप्न हुन सक्छ। जताततै झर्िएको कपालको झुण्ड देख्नु एकदम निराशाजनक हुन सक्छ। कोही पनि आफ्नो पूर्ण लक हराउन चाहँदैनन्। यद्यपि, समयसँगै, यो पत्ता लागेको छ कि एउटा साधारण सामग्री, जुन प्रायः घरका रसोईहरूमा पक्कै हुन्छ, कपाल झर्नु र भंगुर कपाल रोक्नको लागि उत्तम समाधान हुन सक्छ। अण्डाहरू तपाईको सबै कपाल सम्बन्धित मुद्दाहरूको उत्तर हो।
अण्डाहरू कपाल झर्ने रोक्नको लागि जोडिएका छन् र कपालको विकासलाई सहयोग पुर्‍याउने तत्त्वको रूपमा पनि मानिन्छ।
अण्डाले तपाईको कपालमा आश्चर्य गर्न सक्छ
प्रोटीन, बी-जटिल भिटामिन र खनिजहरूको पावर हाउस भएको हुँदा अण्डालाई कपालको महत्त्वपूर्ण हेरचाह गर्ने पौष्टिक तत्वहरू मानिन्छ। अण्डामा रहेको पोषक तत्वहरू, विशेष गरी बी-जटिल भिटामिन र बायोटिनमा कपाल झर्ने क्षमतालाई कम गर्ने क्षमता हुन्छ। यसले कपालको जरालाई सुदृढ पार्दै काम गर्दछ। अंडा कपालको स्वास्थ्यको लागि पौष्टिक हुन्छ, किनकि यसले कपालमा भोल्युम र मोटाईको साथ साथै नयाँ कपालको बृद्धि गर्न सक्छ। अण्डाको प्रोटीन सामग्रीले कपाल बलियो गर्दछ र फ्याट भागले यसलाई सर्त गर्दछ। यसले कपालको बनावटलाई सुधार गर्दछ।
कपालका लागि अण्डाका फाइदाहरू
यद्यपि, तपाईको टाउकोको अंडाको गन्धको विचारले तपाईलाई निस्क्रिय पार्न सक्छ, त्यहाँ तपाईका कपालमा कच्चा अण्डाको आवेदनलाई विचार गर्नु पर्ने धेरै कारणहरू छन्। सबैभन्दा प्रभावशाली कपाल स्वास्थ्य लाभहरूको बारेमा जान्नको लागि पढ्नुहोस् जुन अण्डाहरू प्रदान गर्न सक्षम छन्।
१. कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ
घरमा घरमा तत्काल कसरी हटाउने
'कपालको खाना' को रूपमा परिचित, अण्डाहरू प्रोटीन र अन्य पौष्टिक तत्त्वहरूमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्। नयाँ कपालको स्वस्थ बृद्धिलाई पोषणको साथ प्रचार गरिन्छ दरलाई बढाउने दरमा कपाल बढ्दछ।
२. कपाल झर्नेको रोकथाम
अण्डाले कपालको जरा बलियो पार्दछ। कपालमा अण्डाको प्रयोगले टाउकोको छाला उत्तेजित गर्दछ र यसलाई पोषण दिन्छ।
Hair. कपालको लोच को सुधार
अण्डाको पिण्डलाई धेरै लुटेन लिन मानिन्छ। यो कपाल धेरै राम्रोसँग हाइड्रेट गर्नमा प्रभावकारी छ र यसले लोचलाई पनि सुधार गर्दछ।
Cur. कपालको टुक्राहरू
क्रिटल कपाललाई लुटेनको उपस्थितिमा उपचार गर्न सकिन्छ जुन अण्डाको खोरमा हुन्छ। अण्डालाई कपालको विच्छेद रोक्नका लागि परिचित छ। तिनीहरूले पनि कपालको बनावट सुधार गर्दछ र विभाजन समाप्त हुन्छ।
कपालको राम्रो स्वास्थ्यको लागि अण्डाको माथि उल्लेखित लाभहरू बाहेक, अण्डाको सेतोमा रहेको प्रोटीनले कपाललाई धेरै हदसम्म पोषण दिन्छ र यसले तपाईंको कपाललाई प्राकृतिक चमक दिन्छ। बिग्रिएको कपाल भएको व्यक्तिको लागि, अन्डाको प्रयोगले आश्चर्यकर्महरू गर्न सक्छ।
प्रदूषण र प्रत्यक्ष सूर्यको संपर्कमा हुँदा कपाल बिग्रन्छन। र, रसायनयुक्त धनी कपाल उत्पादन बारम्बार प्रयोग साथ कपाल सीधा बनाउने, कर्लिंग, इत्यादि, तपाइँको सबै भन्दा कपाल बिग्रन सक्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं वास्तवमा तपाईंको क्षतिग्रस्त कपाल काट्न चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि अण्डा निश्चित रूपमा तपाईंको उद्धारमा आउन सक्छ। कपाल percent० प्रतिशत प्रोटीन हो र अण्डामा भएको प्रोटिन बिग्रिएको केराटिन खाली ठाउँलाई पुनर्निर्माण गर्न सक्षम छ जुन बिग्रिएको कपालको संरचनामा गठन हुन्छ। यसले क्षतिग्रस्त कपाललाई उपचार गर्न र निको पार्न सक्षम हुनेछ।
अण्डाको कुन अंशलाई वास्तवमा उत्तम कपाल स्वास्थ्य बूस्टर बन्न सहयोग गर्दछ
तपाईको कपालको प्रकारलाई विचार गर्नु आवश्यक छ जब अण्डाहरूको कुन भागले तपाईंलाई राम्रो कपाल स्वास्थ्य प्रदान गर्न लाभदायक हुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने बेलामा आवश्यक छ। सामान्यतया, तेल भएका केशहरू चाहने महिलाले आफ्नो कपालको लागि अण्डाको सेतो प्रयोग गर्नुपर्छ, जबकि सुक्खा कपाल भएको महिलाले अण्डाको भुईको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
स्वस्थ कपालको लागि अण्डा सेतो प्रयोग गर्दै
प्रोटीनको सब भन्दा धनी स्रोत मानीएको, अण्डाको सेतोमा रिबोफ्लाभिन, नियासिन, पोटासियम, म्याग्नेशियम र सोडियम जस्ता खनिजहरू पनि हुन्छन्। यी सबै खनिजहरू कपालको विकासमा मद्दतको लागि परिचित छन्। तेल कपाल भएका व्यक्तिहरूले अण्डाको सेतो प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसले स्क्याल्पबाट अधिक तेल उत्पादन नियन्त्रण गर्न सक्षम गर्दछ र, साथमा यसले कपाललाई पर्याप्त पोषण प्रदान गर्दछ।
यद्यपि, अण्डाको सेतो भागमा कपालको लागि त्यति कन्डिशनर हुँदैन किनकि अण्डको पहेंलो भागमा वास्तवमा समावेश हुन्छ।
स्वस्थ कपालको लागि अण्डाको जर्दी प्रयोग गर्दै
अण्डा सेतो भन्दा कम भए पनि, अण्डाको पहेंलो भागमा प्रोटीनको पर्याप्त मात्रा हुन्छ। अण्डाको खोराहरु पनि बी जटिल भिटामिन र फोलिक एसिड मा समृद्ध छन्। यसको उपस्थितिले अण्डालाई 'कपाल खानाहरू' भनेर चिनिन्छ। अण्डाको खोरमा फ्याटको उपस्थितिले यसले कपालको लागि राम्रो कन्डिसनर बनाउँछ, विशेष गरी सुख्खा कपालहरूका लागि।
हिंदीमा केटी बच्चा बचाउने नारा
यद्यपि, दुबै सेता र जर्दी प्रोटीनको समृद्ध स्रोत हुन्, सेता भाग अधिक पौष्टिक छ। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग वास्तवमा तेल र खास गरी सुख्खा कपाल नभएको खण्डमा, तपाईं अण्डाको सेतो र अण्डाको पहेंलो दुवैको फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। पूरै अण्डा प्रयोग सामान्यतया कपाल प्रकारको महिलासँग उपयुक्त छ वा संयोजन प्रकारको हो।
अण्डाको मास्क तयार गर्दै जसले कपालको बृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ र कपाल झर्न रोक्न सक्छ
एक वा दुई पूरै अण्डा लिनुहोस् (तपाईंको कपालको लम्बाइमा निर्भर गर्दै), जैतूनको तेलको साथ अण्डा (हरू) ह्वास्क गर्नुहोस्। यो कुटेको अण्डा आफ्नो कपालमा लगाउनुहोस्। यस मिश्रणले तपाईंको सम्पूर्ण कपाल कभर गर्नुहोस्। करीव 30० मिनेट को लागी यसलाई छोड्नुहोस्। चिसो पानीले कपाल धुनुहोस्।
तातो पानीको मिश्रण मिश्रण धुउन प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंको कपालबाट अण्डाको गन्ध हटाउनबाट बचाउँछ। नुहाइसकेपछि, कपालमा कन्डिसन गर्नुहोस् र प्राकृतिक रूपमा सुकाउनुहोस्। कम्तिमा हप्तामा कम्तिमा एक वा दुई चोटि तपाईको कपालको उपचार गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ।
कपालको मास्कको यो फारम अत्यन्त प्रभावकारी छ, किनकि यसले तपाईंको स्क्याल्पमा तेलको सन्तुलनको मर्मत गर्न दिन्छ। यसले कपाल शाफ्ट र जरा पोषण गरेर कपालको बनावटलाई सुधार गर्दछ।
अण्डाहरू सजिलैसँग उपलब्ध हुने सामग्रीहरूमध्ये एक हो र पक्कै पनि सबै जसो खाना पकाउने चीजहरू हुन्छन्, तपाईंले त्यस्ता उत्पादहरूको खोजी गर्नुपर्दैन जुन तपाईंको कपालमा जादुई प्रभाव पार्दछ। अण्डाहरू कपालको बनावट बढाउन र कपालको बृद्धि गर्नका साथै कपाल झर्ने रोक्नको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन सक्छ।
खाना कुखुरा पक्सको समयमा खानको लागि
हिन्दीमा बे gram्गल ग्राम भनेको के हो
ओम जय शिव ओन्कारा
कसरी जीरा संग वजन कम गर्न
वजन घटाउन को लागी घोडा चना कसरी प्रयोग गर्ने
घरेलु उपचार पेटको बोसो छिटो गुमाउन